Jul 3, 2014 pa 8: 33 AM
Ndinokutendai nemazano aya. Izvo zvave zvichitsamwisa kuve nazvo pane angu matsamba.
Zvita 1, 2015 na5: 27 PM
Iwe unotengesa. Isu tavandudza mhinduro chaiyo kune izvi nekuti ivo kutumira spammers havasi kunyangwe kuuya kunzvimbo yako.
Referrer Spam Rubatsiro (@RefSpamHelp)
Isu takavewo nekumwe kutsamwa nereferrer spam. Takaedza dzimwe "mhinduro" dzinowanikwa pawebhu - btw htaccess-manipulaton haidziviriri kubva kune vanonongedzera mweya -, vakatambisa imwe nguva nemaoko kugadzira mafirita muGA uye nemazvo takagadzira yedu otomatiki mhinduro: http://www.referrer-spam.help ...
Zvita 1, 2015 na5: 28 PM
Uye zvinoita sekunge mweya unonongedzera wave mutambi mukurusa. Isu takavandudza iwo mazano saiti. Ndatenda nerubatsiro rwese rwauri kupa!
Ndinokutendai nerubatsiro rwenyu neizvi!
Zvita 1, 2015 na5: 29 PM
Iwe unotengesa. Isu tavandudza rairo zvakanyanya zvichienderana neiyo nyowani mweya yekuendesa nzira idzo jerks dziri kushandisa.
Chikamu chikuru chekubatsira pano, maita basa! Iye zvino kumirira nemoyo murefu shanduko yebounce rate 😀
Zvita 1, 2015 na5: 50 PM
Ini ndakagadzirisa zano rekupa chikamu cheGoogle Analytics. Nenzira iyoyo iwe unogona kuona iko kuitika ipapo ipapo.
Aug 5, 2015 na4: 21 PM
Izvo zvinosemesa kumusoro kwerwizi / pasi penzvimbo spam nyaya: Iwo spammers vanoiisa spam vozopa mushonga - ndiko kufungidzira kwangu.
Wakatarisa IP block kana chero chinhu kuti uone kana paine renji yekuzviwana?
Dzimwe pfungwa dzandiri kuyedza kuona kana vamwe vaedza:
1) Ini ndingati gadziridza kuki kuti ive neyakareba chikamu nguva kuverenga sekushanya asi bots anoramba achingotarisa saiti. Izvi zvinhu zvinoda kurapwa seDDoS kurwisa nekuda kwenzira yavanodonhedza zviwanikwa zvepanyama
2) Gadzira iyo nyowani nyowani woisa iyo nyowani kodhi muGoogle Tag Manager kuti iyo kodhi isiri nyore kupeta. Zvakare, kugadzira account nyowani nekugadzira senge 4 profiles saka yekupedzisira nhamba haigume mu -1 kumwe kuongorora. Asi, ini ndiri kufungidzira panguva ino ivo spammers vari kungozvigadzirira auto manhamba eUA kana kufuratira huwandu hweUA zvese pamwe chete & vachishandisa mushandirapamwe url anovaka chishandiso
Mhoro, mukuru gwara, ini ndavaka yemahara chishandiso iyo inowana analytics uye inovaka htaccess faira kune yako saiti, yayo yemahara http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ chipa uende
Aug 14, 2015 na10: 20 PM
Colin, ichi chishandiso chinonakidza! Ndiri kuzowedzera mune iyo posvo!
Zvita 8, 2015 na4: 50 PM
Zvinhu zvikuru, Douglas.
Zvita 8, 2015 na5: 50 PM
Ndatenda Don! Ndinovimba zvese zvakanaka.
Inobatsira chaizvo…. urwu rudzi rwe spam traffic ndiyo nhamba yekutanga chikonzero chekukanganisa mishumo mu analytics, izvo chaizvo hazvibatsire kuratidza vatengi mashandiro enzvimbo iyi.
Ndira 1, 2016 na12: 55 PM
maita basa webhusaiti yangu izere ne spam uye adsense yakandirambidza
Ndira 3, 2016 na6: 10 PM
Spam iri kuve nyaya hombe mazuva ano. Nekudaro, iyi posvo haisi yezve yako saiti kana vanhu vanonyatsosanganisa yako saiti. Ivo vari kuburitsa kunze Google Analytics. Hazvifanirwe kukanganisa Adsense yako zvachose, asi ichavhiringidza yako Google Analytics.
Ini ndakanyatsoguta neiyi spam. Ndinovimba ichandibatsira.
Neniwo. Handigoni kutenda kuti Google haina kuuya nemhinduro yeizvi.
Chidimbu chikuru, chakave nechinetso neichi munguva yakapfuura uye vanhu vazhinji vanoita kunge vasina zano rekuti zvirikuitika kunyange!
Ndatenda uye ndinobvuma… Ini chaizvo ndanga ndisingazive kuti chii chaiitika kwenguva yakareba, chero!
Ndatenda nenyaya yako Douglas. Zvakawanda kuverenga. Ini ndinovenga zvachose spam, zvakakonzeresa matambudziko mazhinji kumawebhusaiti angu munguva yakapfuura, dzimwe nguva zvakakonzeresa angu masaiti emasaiti kupunzika pandakanga ndiine vhezheni yechinyorwa cheizwi.
Zvirokwazvo kuenda kunogovera ichi chinyorwa pane yangu saiti.
Ndiri parizvino kutanga izwi rezwi blog kune vatengesi.
Hi Douglas .. ndine mubvunzo mumwe chete. Ini ndinoshanyirwa kushoma kubva ku com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Izvi zvinosanganisira spam here? ndatenda nemhinduro yako
Mhoro Fauzy, ndinotenda ndiwo mareferenzi ari pamutemo kubva ku Google Android nharembozha.
Sei kuitirwa chipoko kuchiitika, chii chinobva kune ava spammers?
Zviri chokwadi zvinoshungurudza. Chakanakira chete ndechekuti vashoma-vane hunyanzvi vashandisi vanozotsvaga anotumira uye vanogona kutenga zvigadzirwa zvavo kana masevhisi. Iyo inotyisa uye isinganetsi nzira dzekuyedza kunyengedza vashoma vanoziva saiti varidzi.